Waddamada Khaliijka oo doonaya in Qadar ay wali go'doon ku sii jirto - BBC News Somali
Waddamada Khaliijka oo doonaya in Qadar ay wali go'doon ku sii jirto
Waddamada Khaliijka Carabta ee go'doomiyay dalka Qadar ayaa cambaareeyay jawaabta Qadar ee dalabkoodii 13 qodob ka koobnaa, waxaana haatan dhammaaday wakhtigii kama dambeysta ahaa ee la doonayay in lagu xalliyo dhibaatada diblumaasiyadeed ee kala fogeysay dalalka Khaliijka Carabta.
Wasiirrada arrimaha dibadda ee Sucuudi Carabiya, Masar, Imaaratka iyo Baxrayn ayaa shalay ku kulmay magaalada Qaahira si ay go'aan uga gaaraan waxa ay ka sameyn lahaayeen Qatar.
Dalkaas yar ee ku yaal Khaliijka Carabta ayaa waxa ay ku eedaynayaan inuu maalgeliyo argagixisada.
Waxyaabaha Qadar laga dalbaday ayaa waxaa ka mid ah inay hoos u dhigto xiriirka kala dhaxeeya Iiraan iyo inay xirto warbaahinta Al Jazeera, arrimahaasi oo Qadar ay ku tilmaantay mid aan argagixisnimo ku saabsanayn balse lagu doonayo in lagu cabburiyo xorriyatul qowlka.
Haddaba xaaladdan cirka isku sii shareeraysa ayuu Cabdifitaax Ibraahim Cagayare waxaa uu ka wareystay Dr Maxamed Maxamuud Raage, oo ka faalooda arrimaha Islaamka iyo Carabta oo aan marka hore waydiiyay waxa u furan afartan dal ee ay sameyn karaan?
Maqal Somaliland oo laga helay dhagxaan taariikhi ah oo sawiro ay ku xardhan yihiin
Maqal Haweeney iyada iyo ehelkeeda tacadiyo kala kulmay maamulkii hore ee dowlad deegaanka Soomaalida
Haweeney iyada iyo ehelkeeda tacadiyo kala kulmay maamulkii hore ee dowlad deegaanka Soomaalida